Haptic Kubata, muponesi weiyo iPhone XR yekutsiva kushomeka kweiyo 3D Kubata | IPhone nhau
Haptic Kubata, muponesi weiyo iPhone XR kugadzira kushomeka kweiyo 3D Kubata
El iPhone XR irikutengesa zvakanaka, kana neminongedzo yazvino nedata revaongorori. Ichi chigadzirwa, chakaburitswa munaGunyana kiyi yakakosha, yaive nhanho huru yeApple: yairatidza iyo iPhone neiyo tekinoroji yakafanana neiyo iPhone XS, asi nekusiyana kwakapfava senge OLED skrini kana kupera.
Mumwe mutsauko waive uyo muXR pakange pasina 3D Kubata chishandiso, izvo zvakatibvumidza isu kuita zviito zvakasiyana muhurongwa hwese zvichienderana nekudzvinyirira kwatakaita pachiratidziro pachacho. Kuzadza mukaha uyu, Apple iri kuyedza chinhu chinonzi Haptic Kubata, iyo 3D Kubata kutsiva iyo ingangoona mwenje mune yekupedzisira vhezheni ye iOS 12.1.1.
IPhone XR inogamuchira Haptic Kubata
Iyo iPhone XR skrini inoratidza zvikanganiso zvichienzaniswa neiyo iPhone XS. Paridza chidzitiro chakadaidzwa Liquid Retina, "Iyo yepamberi LCD pani pamusika". Kuvapo kweichi skrini kwakatadzisa iyo kurasikirwa nemabasa senge 3D Kubata.
Kutenda ku-state-of-the-art engineering, iyo iPhone X skriniR inosvika kumakona. Mhedzisiro yacho izere-skrini dhizaini, iyo hombe LCD iyo iPhone yakambove nayo, uye saizi iyo ichiri kukwana zvakakwana muruoko rwako.
3D Kubata chaive chishandiso chakaunzwa neApple neiyo iPhone 6s iyo yaibvumidza vashandisi kuita zviito zvitatu zvinoenderana nekuwanda kwavakaita pachisimba
Kurumidza zviito: kana tikabaya pane icon yeapp tinosvika nekukurumidza zvinhu zvakagadzirwa nemusunguri iye
Peek uye Pop: kana tikabaya chiziviso, inoratidzwa uye inotipa zvirimo pasina kuwana iyo application pachayo, zvakafanana kana tikabaya pane kero yewebhu, mugwagwa muMepu ... mikana isingaperi
Zororo remabasa: Tinogona zvakare kudhirowa muApple app. Kana isu tikamanikidza zvakanyanya, sitiroko ichawedzera, nezvimwe.
Pasina inoonekera skrini, 3D Kubata kwakanyangarika pane iyo iPhone XR, chii chakaita kuti Apple afunge nezvekupa izvo zvakanakira neimwe nzira. Uye zvinoita sekunge vaiwana. Iyo ficha inosunungurwa muiyo iOS 12.1.1 beta yevanogadzira. Ndezve Haptic Kubata. Iko kumanikidza kwatakaita neiyo 3D Kubata kunoshandurwa nekubata pasi iyo skrini kune imwe nguva. Zvinotaridza kushanda zvakanaka, asi isu tichaona mashandisiro evashandisi kuchinhu chitsva ichi.
Makanika aApple anga akanaka: kupa zita rakasiyana kune basa ravanotenda zvakasiyana asi, shure kwezvose, Haptic Touch ine chinangwa chekupa ruzivo uye nekukurumidza kuwana kune zvinoshandiswa uye zviito zvakasarudzika nemuchina chete (kwete kudzvanya). Tichaona kuti basa iri rinogamuchirwa sei mune yekupedzisira vhezheni ye iOS 12.1.1.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Haptic Kubata, muponesi weiyo iPhone XR kugadzira kushomeka kweiyo 3D Kubata
Haptic Kubata ndeyekutsikirira kwemamwe masekonzi ... mmm uye inongowanikwa muXr? Ivo vanotikwenya isu handiti?
Pakatobuda 3D Kubata, hazvina musoro kuti uzviise muiyo iPhone 5 kana 5S nekubata muchina ... zvakanaka ... Vangusrdia ENGINEERING vakaidaidza handiti?
Apple inosvika pachibvumirano neAmazon kutengesa zvimwe zvigadzirwa